FAAHFAAHIN: Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay duleedka Gaalkacyo & Xiisadda oo sii kordhaysa – Puntlandtimes
FAAHFAAHIN: Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay duleedka Gaalkacyo & Xiisadda oo sii kordhaysa
GAALKACYO(P-TIMES)- Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal u dhaxeeya ciidamo kasoo kala jeda Waqooyiga & Koonfurta gobalka Mudug oo ka dhacay deegaan ka durugsan magaalada Gaalkacyo, kana xiga dhinaca barriga.
Dagaalkaas ayaa la xaqiijiyey in uu ka dhashay dhaawac gaaraya 6 qof oo ah dhinacyada dagaalamay, waxaana wararku sheegayaan in xiisad colaadeed ay wali goobtaas ka taagan tahay.
Goobjoogayaal kusugan labada dhinac ee magaalada ayaa u sheegay Puntlandtimes in ay jirto xiisad dagaal, gaar ahaana laga dareemayo gudaha magaalada maleeshiyaad u baxaya aagaas dagaalka.
Labada maamul ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan arrimahan, waxaana jira kulamo u socda labada maamul oo ay ku kala leeyihiin xarumahooda, kuwaas oo ku saabsan jawaabta ay ka bixinayaan dhacdooyinka.
Gudoomiyaha gobalka Mudug ee Puntland oo ay la hadashay Puntlandtimes wuxuu u sheegay in ay ka shaqeynayaan nabadda iyo daganaanshaha, isagoo ku eedeeyey dhinaca Galmudug in aysan wali u hogaansamin heshiisyadii la gaaray dhawaan.
Puntland & Galmudug ayaa dhawaan kala saxiixday heshiis nabadeed, kaas oo ay ku heshiiyeen in laga shaqeeyo sidii loo joojin lahaa isku dhacyada maleeshiyo beeleedka, loona abuuri lahaa jawi wada shaqeyneyd oo dhexmara labada dhinac.
Laakiin heshiiska ayaa u muuqda mid aan hirgalin tan iyo markii la saxiixay waxaana jiray falal sababay dhimasho iyo dhaawac oo kala gaaray dad soo kala jeeda labada dhinac, kuwaas oo muujiyey in uusan jirin Is afgarad wanaagsan.